KA QAYB QAADO - Sheekada Saaxiibtinimada - The Holy Holy of Vietnam Studies
KA QAADO - Sheekada Saaxiibtinimada
Markay xagaaga soo gasho hawo diiran oo ruxaysa bariiska, dhegaha kuwaas oo sii kordhaya oo aad u badan oo dahab ah, iyo marka kuleylka sunbeams uu soo miro miraha ku dhegan geedaha miraha culeyska culus, waxaad badanaa maqashaa murugada murugada leh ee 'monosyllabic twitter' wax yar. shimbiraha: «Quoc! Quoc!» Waa baaqii shimbirta Ha-Quyen taas oo weligeed xanbaarsan murugadiisa isaga oo baadi goobaya saaxiibkii uu jeclaa ee uu lumiyay. Hadaad jeceshahay inaad maqasho sheekadan saaxiibtinimo, waxay u socotaa sidan:
Hal mar, waxaa jiray labo asxaab ah oo is jeclaaday sida ugu badan haddii ay walaalo ahaayeen2.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa midkood guursaday, wuxuuna ku adkeystay in saaxiibkiis uu yimaado oo uu la joogo gurigiisa cusub, waayo ma uusan dooneynin in laga sooco qofka dambe. Laakiin aroosadiisu ma aysan jeclayn tan, oo waxay ku kacday wax kasta oo ay ku tusayso martida inuusan soo dhaweyn gurigeeda. Bilowgii, waxay bilowday inay soo jeediso in saaxiibku naagtiisa guursado oo uu dhiso guri kale, waayo, waxay ku doodday, «Waxa keli fiicneyd in qofku lahaado caruur, qoyskiisana u guto waajibaadkiisa awoowayaashiis» Laakiin markay ogaatay inuusan saaxiibku “ujeedo guur lahayn, xeeladeeda ayay beddeshay. Waxay siisay ninkeeda iyo saaxiibkiis nasasho, waayo iyadu way canaanan jirtay oo garaaci jirtay addoommada maalintii oo dhan, iyadoo caddeysay inaysan waxba u fiicnayn oo ay ahayd wax laga xumaado oo laga xishoodo indadka da'da yar iyo kuwa caafimaad qaba waa inay ku noolaadaan kuwa kale sida dulle». Badanaa, waxay sameysay goob madal ah, waxayna caddeynaysaa inay tahay noolaha ugu nugul adduunka, iyada oo u shaqeysa sidii addoomo sidii ay u quudin lahayd dad badan «afla'aanta». Way iska cadahay in martidu ay ka mid ahayd «afla'aanta». Markii hore, kan dambe wuu aamusay wuxuuna u dhibay wax kasta inuu u dhawaado saaxiibkii qaaliga ahaa ee uu ka jeclaa qof kasta oo adduunka ah. Laakiin aakhirkii, waxyaabo ayaa sii xumaaday, oo nolosha reerka si fudud looma dulqaadan karin.
Wuxuu go’aansaday inuu cararo. Laakiin isagoo og inuu ninka guursaday uu meel walba u raadinayo, ayuu jaakadkiisa sudhay laan ku taal kaynta si uu u rumaysto inuu dhintay si loo joojiyo baadhitaankii ugu dambeeyay.
Isla markii uu ogaadey martidii qaaliga ahayd inay tagtay, ninkii guursaday ayaa u soo orday oo raadinaya isaga. Wuu orday wuuna orday wuuna orday ilaa uu duurka yimid oo arkay jaakad geedka saaran. Si qadhaadh ayuu u ooyay wakhti dheer, wuxuuna waydiiyey qofkasta oo uu la kulmo halka saaxiibkiis ay joogi karto. Cidina ma oga. Dhir-dhibiyeyaashu waxay yiraahdeen waa inuu watay libaax kulul oo ku noolaa god dheer oo kaynta dhexdeeda ah. Haweeney gaboobay oo ag maraysay, ayaa sheegtay in ay tahay in lagu hafto wabiga ku qulqulaya dooxadaas. Ilmo badan oo dheeri ah ayaa la daadiyay.
«Hoogay! saaxiibkay gacaliyahay waa dhintay oo waa dhammaaday»Ayuu yidhi ninka guursaday.
«Ma aaminsani», Ayaa yidhi geedaha digaagga.
«Wuu dhintay wuuna tegey», Wuxuu ku yidhi shimbiraha.
«Uma maleyneynno sidaas», Way rogeen.
Markii dambena rajo cusub ayaa ka soo baxday qalbigiisa.
Dib buu u socday oo wuxuu u gudbay buuro iyo dooxooyin ilaa cagihiisu ay xanuunayeen oo bararsameen, laakiinse isagu ma joojin inuu socodkiisii ​​sii wado. Oo isna wuu sii wacayay markasta:Quoc! Quoc! intee joogta Xageed jogtaa»- Quoc wuxuu ahaa magaca saaxiibkiis.
Ugu dambayntiina isaga oo daallan ayuu madaxiisa isku tuuray dhagax weyn wuuna seexday. Wuxuu ku riyooday saaxiibkiis inta uu ku riyoonayay, noloshiisu si aamusnaan ah ayay ku simbiriirixday. Isaga oo ruuxiisu weli xasilloon tahay ayaa loo beddelay shimbiru oo wicitaankii ku celceliya «Quoc! Quoc!»Habeen iyo maalinba.
Guriga dhexdiisa, aroosadiisu way ooyday oo ka walwalay maqnaanshihiisa. Dhowr maalmood ka dib, markay aragtay inuusan soo noqonaynin, mar dambe ma sii sugi karin, way xaday oo meel fog bay ka warwareegaysay ilaa ay timid duur weyn. Iyadu garan wayday halka ay tagayso, aad bay u naxday oo u baqday. Isla markiiba waxay maqashay codkeedii ninkeeda oo wacaya: «Quoc! Quoc!». Qalbigeedu wuu boodbooday, oo waxay ku orodday inay raadiso, laakiinse waxay maqashay uun baalasha baalasheeda oo waxay aragtay shimbiru oo duulaya iyada oo baaba'aysa monosyllabic twitter: «Quoc! Quoc!".
Waxay raadisay oo raadsatay si aan micno lahayn, aakhirkiina, jidh ahaan iyo anshax ahaanba way daashay. Qalbigeeda waxaa ka buuxsamay murugo iyo murugo in ay jabtay, halka shimbirtii Ha-Quyen weli wuu ka duulay meel walba, isagoo wata murugadiisa weligeed ah.
Nooca Fiyatnaamiis (Vi-VersiGoo): QUYEN SAMEE - Cau chuyen ve tinh ban.
◊ Shirka BICH-CAU ee horay loo sii qorsheeyay - Qaybta 1.
◊ Shirka BICH-CAU ee horay loo sii qorsheeyay - Qaybta 2.
1 : Hordhaca RW PARKES wuxuu soo bandhigayaa LE THAI BACH LAN iyo buugaagteeda sheekooyinka gaagaaban: “Mrs. Bach Lan ayaa soo ururiyay xulasho xiiso leh oo ah Halyeeyada Fiyatnaamiis kaas oo aan ku faraxsanahay in aan qoro maahmaah kooban. Sheekooyinkaan, si wanaagsan oo si fudud uuu tarjumay qoraagu, waxay leeyihiin soojiidasho aad u weyn, oo aan laga helin qayb yar oo ka timid dareenka ay ku gudbinayaan xaaladaha bini aadamka ee caan ah oo ku labisan dharka qalaad. Halkaan, meelaha kuleylka ah, waxaan ku leenahay jacello aamin ah, xaasas xaasid ah, hooyo aan naxariis lahayn, oo ah sheeko badan oo dad reer galbeed ah lagu sameeyo. Hal sheeko runtii waa Kabaal mar kale. Waxaan aaminsanahay in buuggan yar uu ka heli doono akhristayaal badan isla markaana kicin doono xiisaha saaxiibtinimo ee waddan dhibaatooyinkiisa maanta jira ay yihiin kuwo wax laga xumaado ah oo caan ku ah dhaqankoodii hore. Saigon, 26ka Febraayo 1958. "
2 : Mid baa la yidhaa Nhan iyo kan kale Quoc.
◊ Tusmada iyo sawirada - Xigasho: Legends Vietnamese - Marwo LT. BACH LAN. Kim Lai An Quan Daabacayaasha, Saigon 1958.
Images Sawirro muuqaallo muuqaal ah oo muuqaallo kala duwanaansho leh ayaa waxaa dejiyay Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com.
(Booqday jeer 525, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 2,240
← Ciyaaraha CARRUURTA VIETNAM - Daqiiqadihii MEETING Febaraayo, 22, 1943
Dharka Goose-Down - Halyeeyga qaanso-isku-tallaabta ah →
BADBAADADA TALOOYINKA Phong Hoá
Comments Off on PATTERNS Xayeysiiska Phong Hoá
Lý Toét, Xã Xệ oo ku yaal URBAN
Comments Off ku yaal Lý Toét, Xã Xệ oo ku yaal URBAN
Pearl ee Bariga Fog - XUQUUQDA AADANAHA EE FOSTILIZED FUOTSTEPS (Qaybta 1)
Comments Off on Luulkii Bariga Fog - CAGSIYO CAGAAR AH (Qaybta 1)
ARRIMAHA GUUD EE VIETNAMESE GUUD EE ARS - Qaybta 1
Comments Off ku saabsan ARDAYDA hore ee VIETNAMESE MARTIAL ART - Qaybta 1
Booqashada Maanta: 202
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,123
Guud ahaan Wadarta: 286,018